Fepetra fampiasana - InstaZOOM
Home » Fepetra fampiasana
Amin'ny fampiasana ny tranokalanay dia manambara ianao fa manaiky ireo fepetra sy fepetra ireo. Azafady vakio tsara izy ireo ary ataovy azo antoka fa manaraka azy ireo ianao.
1. Ara-dalàna ny fampiasana ny tranokalanay.
2. Tsy azo atao ny maka kopia ny fitaovana misy zon'ny mpamorona.
3. Tsy mahazo miampita instazoom.mobi manaparitaka ny rakitra alaina.
4. Ianao ihany no manan-jo hampiasa azy ireny ho an'ny tanjona manokana.
5. Tsy mirakitra an-tsoratra ny zava-mitranga amin'ny lohamilinay izahay.
6. Tsy mitahiry rakitra ao amin'ny servery mandritra ny fotoana tsy voafetra izahay.
7. Ny fangatahana fampidinana dia ataon'ny mpampiasa ihany, toy ny ao amin'ny DMCA (Daty Laharam-pahamehan'ny Digital Millennium) voalaza.
Fepetra fampiasana feno:
Raha ianao instazoom.mobi ampiasaina na amin'ny instazoom.mobi fidirana, manaiky ny fepetra fampiasana ny instazoom.mobi araka ny voalaza ato amin’ity taratasy ity. Tsy nahazo alalana ianao instazoom.mobi na hampiasa ny serivisiny raha tsy manaiky ireo fepetra ireo ianao.
Ekenao fa afaka mandefa fanavaozam-baovao aminao momba ireo fepetra fampiasana ireo ny orinasa amin'ny fotoana rehetra ary tsy manome antony. Manaiky ihany koa ianao fa ho voafatotry ny fanovana ho avy amin'ireo fepetra fampiasana ireo raha vao apetraka ao amin'ny tranokala.
Raha tsy manaiky ny iray amin'ireo fepetra fampiasana ireo ianao dia ho lany daty ho azy ny fanekenao raha mandika ny iray amin'ireo fepetra ireo ianao. Araka ny fanapahan-kevitry ny instazoom.mobi io fahazoan-dàlana io dia azo atsahatra amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy antony.
Ity pejy ity dia nohavaozina farany tamin'ny 1 Janoary 2014.
Fampiasana rakitra log
Tsy mirakitra adiresy IP na angona mpampiasa avy amin'ny mpitsidika anay izahay. Mampiasa Google Analytics izahay hijerena hoe firy ny olona mitsidika ny tranokalanay. http://www.google.com/analytics/tos.html
Mpiara-miasa amin'ny dokam-barotra
Mampiasa serivisy dokam-barotra amin'ny antoko fahatelo izahay hanaovana dokam-barotra instazoom.mobi Mampiseho dokam-barotra. Ny serivisy dokam-barotra sasany dia mampiasa teknolojia toy ny cookies sy ny fanilo web rehefa manao dokam-barotra ao amin'ny tranokalanay izy ireo, izay mandefa vaovao momba anao amin'ny mpanao dokam-barotra. Ilaina izany mba hampisehoana anao dokam-barotra amin'ny fiteninao. Vakio bebe kokoa momba ny tolotr'izy ireo ao amin'ny tranokalany.
Fitsipika ao an-trano
1. Aza mandika lalàna ao amin'ny firenenao.
2. Aza misintona mozika tsy ara-dalàna ny zon'ny mpamorona.
3. Instazoom- Ny rakitra dia azo ampiasaina ho an'ny tanjona manokana ihany ary tsy azo ampitaina na zaraina.
Manaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ianao amin'ny fampiasana ny tranokalanay.
DMCA ary esory
- Fitaovana tsotra ho an'ny Instazoom hanitatra ny sary.
- Tsy mampiantrano rakitra sary izahay.
- Ity tranonkala ity dia tsy manohana kopia piraty.
- Alohan'ny hifandraisana aminay, vakio azafady ity pejy ity: DMCA.
- Raha tompon'ny zon'ny mpamorona sary ianao ary te hisoroka ny fiovam-pony dia alefaso mailaka izahay.
Hatsahatra ny famadihana ireo sary ireo.
Raha manana fanontaniana na soso-kevitra momba ny serivisy ianao dia aza misalasala mifandray aminay: [email voaaro]